Poptin: Popup Smart, Forme Embedded, ary Autoresponders
Sabotsy, Desambra 12, 2020 Alarobia, Desambra 23, 2020 Douglas Karr
Raha mitady hiteraka fitarihana, varotra na famandrihana bebe kokoa avy amin'ireo mpitsidika miditra amin'ny tranokalanao ianao dia tsy isalasalana ny amin'ny fahombiazan'ny popup. Tsy tsotra toy ny manelingelina ireo mpitsidika anao anefa izany. Ny popup dia tokony omena am-pahendrena mifototra amin'ny fihetsiky ny mpitsidika mba hanomezana traikefa tsy misy valaka araka izay azo atao. Poptin: Ny Popup Platform Poptin dia sehatra tsotra sy mora vidy hampidirana ny paikadin'ny fitarihana mitarika toy izao ao amin'ny tranonkalanao. Manolotra ny sehatra:
Talata, Jona 25, 2019 Alarobia, Desambra 23, 2020 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia ao amin'ny Squarespace, rafitra fitantanana atiny izay manome ny fototra rehetra - ao anatin'izany ny ecommerce. Ho an'ireo mpanjifa manompo tena dia sehatra lehibe misy safidy maro izy ity. Matetika izahay dia manome soso-kevitra amin'ny fampiantranoana WordPress noho ny fahaiza-manaony sy ny fahalalahany tsy voafetra… fa ho an'ny sasany ny Squarespace dia safidy matanjaka. Na dia tsy ampy ao amin'ny Squarespace aza ny API sy fampidirana novokarina an-tapitrisany izay vonona ny handeha, dia mbola afaka mahita fitaovana mahafinaritra sasany hanatsarana ny tranokalanao ianao. izahay
Manampia Pop Sales amin'ny tranokalan'ny Ecommerce anao
Alarobia 9 Janoary 2019 Alarobia 9 Janoary 2019 Douglas Karr
Ny porofo ara-tsosialy dia manakiana rehefa manapa-kevitra ny mpividy amin'ny tranokala ecommerce misy anao. Ny mpitsidika dia te hahafantatra fa atokisana ny tranokalanao ary misy olon-kafa mividy avy aminao. Imbetsaka, tranokala ecommerce no mijanona tsy mihetsika ary efa tonta sy taloha ny hevitra… misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitr'ireo mpividy vaovao. Endri-javatra iray izay azonao ampiana, ara-bakiteny ao anatin'ny minitra vitsy dia ny Sales Pop. Ity no tampon-kavia havia ambany izay milaza aminao
Alakamisy Oktobra Oktobra 25, 2018 Alakamisy Oktobra Oktobra 25, 2018 Douglas Karr
Isam-bolana dia mahazo mpitsidika an'arivony an'arivony aho amin'ny alàlan'ny fampandrenesana fanindriana browser izay natambatra. Mampalahelo fa mihidy izao ilay sehatra nofidianay ka tsy maintsy nitady iray vaovao aho. Mbola ratsy kokoa aza, tsy misy fomba fanafarana ireo mpamaky taloha ireo hiverina amin'ny tranokalanay ka handray anjara amin'ny laoniny isika. Noho izany antony izany dia nila nisafidy sehatra iray fanta-daza sy azo refesina aho. Ary hitako tao amin'ny OneSignal izany. Tsy izany ihany